THE BIG PICTURE – AFGHANISTAN DEC 2009 TO DEC 2010 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » THE BIG PICTURE – AFGHANISTAN DEC 2009 TO DEC 2010
THE BIG PICTURE – AFGHANISTAN DEC 2009 TO DEC 2010
Posted by Kyaemon on Jan 9, 2011 in Community & Society, Education, History, Photography, Society & Lifestyle, Travel |5comments
Afghanistan KYAEMON Taliban Travel
Afghanistan, December, 2010 – The Big Picture – Boston.com
Afghanistan, November, 2010 – The Big Picture – Boston.com
(POSTED BEFORE IN MDY GAZETTE. SEE PICS & VIDEOS BELOW:)
The Mandalay Gazette | Organizing for Myanmar Burma | News Network | Blog | Afghanistan, August 2010
Afghanistan, June, 2010 – The Big Picture – Boston.com
Afghanistan, January, 2010 – The Big Picture – Boston.com
Afghanistan, December, 2009 – The Big Picture – Boston.com
ရေးကြပါအုံး…us ကိုကြတော့ ဘာမှမရေးရဲကြဘူးလား….သေလိုက်တာကပြည်သူပြည်သားတွေ…
Do u know AFGHANISTAN? before and after US war? PLZ check it out.
How about vietnam…and so on !!!!!! What I mean is ရေးကြပါ..မကောင်းတာတွေ့ရင်ေ၇း comment တွေကတစ်ဖက်သတ်ကြီးဖတ်နေရလို့
comments ၀င်ရေးတဲ့လူတွေထဲမှာ ခင်ဗျားထင်သလို သိက္ခာမဲ့တဲ့လူ မပါဘူး။ U.S မကောင်းရင် ရေးမှာပဲ။ အခုဟာက ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် မှန်မှန်ကန်ကန်သိထား ပုံမရဘူး။ ဒီမှာက သတင်းမှောင်ချထားတာ။ ခင်ဗျားကိုယ်တိုင် မှန်မှန်ကန်ကန်သိအောင်လုပ်ပါ။ U.S ဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်အရေးမှာ ကိုယ်ကျိုးမဖက်ဘဲ ပါဝင်ခဲ့တာပါ။ ဆိုဗီယက်တွေဝင်တုန်းက အာဖဂန်မှာ လူ၁သန်းသေတာ ခင်ဗျား သေချာမသိသေးဘူး။ မူဂျာဟစ်ဒင်တွေဝင်တုန်းက ၃-၄ လအတွင်း ကဘူးလ်တစ်မြို့ထဲတင် လူငါးသောင်းသေတာပါ။ တာလီဘန်ကတော့ အယုတ်မာဆုံးဆိုပါတော့။ U.S သာမ၀င်ရင် ခုလောက်ဆို အာဖဂန်တွေ လူမျိုးပြုတ်နေပြီ။
to Kyaemon- ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ တနေ့လုံး တညလုံးမီးပြတ်နေလို့ အခုမှ ကြည့်ရတယ်။ ကြည့်လို့တောင်မ၀ဘူး။ သိပ်လှတဲ့ ကန်ဒဟာ ကို စိတ်ကူးနဲ့ မြင်ယောင်မိတယ်
Thanks ,,,,How do you think ? If these Muslims had Hyper Power likes US……How the world goes on?